Read more about WannaCry Ransomware နှငျ့ ပတျသကျ၍ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာပညာရှငျအသငျးမှ ထုတျပွနျသော သတိပေးအကွံပွုခကျြ ၁/၂၀၁၇
Submitted by zwintun on Wed, 05/11/2016 - 01:23
Read more about Information Technology Professional Examination ITPEC exam results
Read more about “Wireless Network Essentials Course (WNE)”အမှတ်စဉ် (၆) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
“Advanced Wireless Networking Course” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်
Submitted by zwintun on Tue, 09/24/2013 - 23:59
Networking နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက်
Advanced Wireless Networking Course သင်တန်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့ ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကို အခြေခံမှ စ၍ အဆင့်မြှင့်အထိ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး
ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO များ၌ အလုပ်လုပ်နေသော Network
Engineer များ၊ IT Officer များ၊ wireless အကြောင်းလေ့လာနေသူများ၊
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဦးဇော်ဝင်းထွန်းမှ
စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားလေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာများ….
Ø WLAN Configuration, Ad-host
Ø WLAN (point to point, point to Multipoint, Repeater)
Ø Using Outdoor Antenna Airmax sector 5GHz with Rocket Titanium
Ø WiFi-HotSpot Creating for software and hardware
Ø PFsense, Zentyal, Easy Server
Ø Wifi IP Camera and Channel Device
Ø Window 2008 Server Radius, VOIP Gateway
Ø Local VPN Network Configuration
Ø WiFi Controller Device and Access Point CPE
Ø Pfsense hotspot and radius wifi
Ø Basic Mobile wifi Network
သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ
(၅) ရက် မှ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်အထိ
သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၉း၀၀ နာရီ မှ
နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီအထိ
သင်တန်းကြေး - ၁၈၀,၀၀၀ိ/ (တစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျပ်)
MCPA Member (50%) - ၉၀,၀၀၀ (ကိုးသောင်းကျပ်)
သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၁)၊ MICT Park၊
MCPA Lab Room၊ လှိုင်မြို့နယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၄)
ရက်နေ့ညနေ (၄) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊
ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း
Read more about “Advanced Wireless Networking Course” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်
MCF မှ ကြီးမှုး၍ Seminar on IT Leading-Edge Business and Technology Solution" ခေါင်းစဉ် ဖြင်. Korea Institute of Science and Technology မှ Dr. Kyu Hwan Lee က ဟောပြောဆွေးနွေးမည်
Submitted by zwintun on Wed, 05/01/2013 - 16:46
Speaker : Dr. Kyu Hwan Lee
Read more about MCF မှ ကြီးမှုး၍ Seminar on IT Leading-Edge Business and Technology Solution" ခေါင်းစဉ် ဖြင်. Korea Institute of Science and Technology မှ Dr. Kyu Hwan Lee က ဟောပြောဆွေးနွေးမည်
Barcamp Yangon 2013 ပွဲ ကျင်းပ
Submitted by zwintun on Sun, 01/20/2013 - 17:35
Barcamp Yangon 2013 ပွဲ ကို 19-20th January 2013 Mynamar Infotech တွင် ကျင်းပ လျက်ရှိပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ တက်ရောက်လာသူပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်နေပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်သည့် Barcamper ၂၀ ဦးခန့် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဘားကမ့်တွင် နိုင်ငံတကာ၌ ခေတ်စားနေသည့် နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဆိုင်ရာများနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို တက်ရောက်လာသည့် လူငယ်များက အပြိုင်အဆိုင် ဆွေးနွေးဖလှယ်မှုများကို ပြုလုပ်နေပြီး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များဖြင်. ပိတ်ပွဲပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို http://www.barcampyangon.org/ , https://www.facebook.com/barcampyangon?filter=2 လင်.များတွင် ကြည်ရူလေ.လာနိုင်ပါသည်။
Read more about Barcamp Yangon 2013 ပွဲ ကျင်းပ
Read more about Myanmar Software Industry တိုးတက်ရေးဆွေးနွေးပွဲ
HTC Corporation မှ CEO နှင့် President, Mr.Peter Chou နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Submitted by zwintun on Fri, 05/18/2012 - 12:15
နေ့ရက်။ ။ ၁၉. ၅.၂၀၁၂ (စနေနေ့)
အချိန် ။ ။ နံနက် (၉း၃၀) နာရီ
နေရာ ။ ။ Conference Hall, MICT Park, Hlaing Tsp., Yangon.
Read more about HTC Corporation မှ CEO နှင့် President, Mr.Peter Chou နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
“CCNA & Enterprise Networking” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Wed, 04/25/2012 - 06:55
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ Networking နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် အဆင့်မြင့် Networking သင်တန်းတစ်ခုကို ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့ ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO များ၌ အလုပ်လုပ်နေသော Network Engineer များ၊ IT Officer များအထူး တက်ရောက်သင့်ပါသည်။ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် Networking နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံသဘောတရားများ ဖြစ်သည့် TCP/IP, IPv4 Addressing အစရှိသည်တို့ကိုသိရှိနားလည်ထားပြီး ဖြစ်ရပါမည်။
သင်တန်း၌ Analyzing IP Communication, IP Addressing, Trucking, Dynamic Routing, WAN, Unified Communication အစရှိသည်တို့ကိုစာတွေ့လက်တွေ့လေ့လာရမည် ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကာလ - ဧပြီလ ၃၀ ရက် မှ မေလ ၁၁ ရက်အထိ (တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့)
သင်တန်းအချိန် - ညနေ ၅း၀၀ နာရီ မှ ၇း၀၀ နာရီ အထိ
သင်တန်းကြေး - အခမဲ့
သင်တန်းသားဦးရေ - (၂၀) ဦး
သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၁)၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများ အနေဖြင့် April 28 ရက် ညနေ (၅) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် -၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read more about “CCNA & Enterprise Networking” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT- Laboratory “VM Ware Setup and Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Tue, 04/24/2012 - 12:28
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းသည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာ မှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဖြစ်သော ဦးရဲကျော်သိန်း မှ ဧပြီလ (၂၈) ရက်တွင် နေ့လည် (၁း၀၀ မှ ၃း၀၀) အထိ တစ်ကြိမ်၊ (၃း၀၀ မှ ၅း၀၀) အထိ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ခွဲ၍ “VM Ware Setup and Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများ၊ Network ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာနေသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး ဧပြီလ (၂၇) ရက် ညနေ (၃း၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT- Laboratory “VM Ware Setup and Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်